24.03.2020 Tatitra tamin'ny antsipiriany momba ny Coronavirus: Isan'ny mararin'ny marary 26 | RayHaber | raillynews
HomeANKAPOBENYMISY FOTOTRACoronavirus24.03.2020 Tatitra tamin'ny antsipiriany momba ny Coronavirus: Isan'ny mararin'ny marary
24.03.2020 Tatitra tamin'ny antsipiriany momba ny Coronavirus: Isan'ny mararin'ny marary
latabatra mampiseho ny toe-draharaha farany momba # Coronavirus toe-javatra any Torkia, dia nizara ny vahoaka.
Isan'ny tranga: 1.872
Fikarakarana mafimafy: 136
Ny fihafiana (marary mpankafy): 102
vorontsiloza corona virosy marary list
Twiti, izay nanazava ny fifandanjan'ny coronavirus tamin'ny daty 24.03.2020, ny minisitry ny fahasalamana Fahrettin Koca dia toy izao manaraka izao:
Firifiry? Anontaniana isan'andro ao amin'ny firenena 195. Fatiantoka fa raha tsy tara loatra ho an'ny Torkia. Ny fepetra dia mety hisakana ny fitomboana. 24 fitiliana no natao tamin'ny FARANY 3.952 FARANY. Miisa 343 ny fitiliana vaovao. Very amin'ny 7 ny marary anay. Ny iray dia marary COPD. Enina ny fahanterana. Mahery dia mahery toy ny fepetra noraisinay.
Torkia Coronavirus mandanjalanja Sheet 24.03.2020/XNUMX/XNUMX
Hatreto dia miisa 27.969 ny fitiliana natao, 1.872 44 no voan'ny fizahana, ary namoy marary XNUMX izahay, izay ny ankamaroany dia marary sy COPD.
11.03.2020 - Raharaha 1
13.03.2020 - Raharaha 5
14.03.2020 - Raharaha 6
15.03.2020 - Raharaha 18
16.03.2020 - Raharaha 47
17.03.2020 - Total 98 tranga + 1 maty
18.03.2020 - Total 191 tranga + 2 maty
19.03.2020 - Total 359 tranga + 4 maty
20.03.2020 - Total 670 tranga + 9 maty
21.03.2020 - Total 947 tranga + 21 maty
22.03.2020 - Total 1256 tranga + 30 maty
23.03.2020 - Total 1529 tranga + 37 maty
24.03.2020 - Total 1872 tranga + 44 maty
Minisitry ny fahasalamana Fahrettin Koca sy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Ziya Selçuk dia nanao fanambarana ho an'ireo mpikambana tao amin'ny mpanao gazety taorian'ny fivoriana nataon'ny Komity siantifika siantifika Coronavirus. Ny minisitra Koca dia nanome vaovao momba ny efijery izay hanambarana ny isan'ny tranga.
Ny fanamafisana fa tsy misy andrim-panjakana momba ny fahasalamana na ny mpitsabo rehetra afaka manakana ny fifindran'ny otrikaretina, hoy i Koca: "Azonao atao ny misoroka izany. Azonao atao ny misoroka izany amin'ny alàlan'ny fisintonana ao an-tranonao. Azonao atao ny misakana azy amin'ny fanaovana saron-tava raha ilaina. Azonao atao ny misoroka izany amin'ny alàlan'ny fisorohana ny fifandraisana. Matanjaka ny fanjakana eto amin'ity tolona ity. Isika no hahazo vokatra miaraka amin'ity herinaratra ity. ”
"Tsy vitsy ny isan'ny antitra antonony"
Niresaka tamin'ny zokiolona i Koca nilaza hoe: "Tsy vitsy ny isan'ny tranga antitra. Ny virus dia tsy manavaka ny tanora, antitra na antitra. Raha manana aretina izay tsy fantatrao ianao, dia haseho ilay otrik'aretina ary ho sarotra kokoa ny fitsaboana noho ny nantenanao taloha. "
"Aza mba azafady fa ny fialan-tsasatra raha fialantsasatra"
Fahatsiarovana fa mitohy ny fampianarana ny zaza, hoy ny minisitra Fahrettin Koca:
“Omena mandritra ny fotoana kelikely amin'ny Internet sy fahitalavitra ny fampiofanana. Azafady, aza diniho ny fangatahana ho fialantsasatra, manakana ny zanakao tsy hahazo ny lohahevitra toy izao. Tsy tokony havela hijanona ao amin'ny lesona sy ny namany izy ireo. ”
Havaozina nomerao ny fampahalalana ary zaraina amin'ny vahoaka isan'andro.
Nizara ireto fampahalalana manaraka ity momba ny fangatahana tokony hataon'ny besinimaro Koca ny Minisitra Koca: hahazoana vaovao mora sy mazava kokoa mandritra izao vanim-potoana izao:
"Amin'ny vanim-potoana ho avy, dia havaozinay tsy tapaka ny isan'ireo marary, ny fitsapana, ny isan'ny tranga very, ny isan'ireo marary amin'ny fikarakarana fatratra, ny isan'ny marary mifandray amin'ny fampidirana, ny fitaovana fofonaina, ary ny isan'ny marary sitrana, ary zaraina isan'andro amin'ny besinimaro isika."
Fanafody avy any Sina
Raha niresaka momba ny isan'ireo fanafody alaina avy any Chine sy ny fampiasany ireo marary, hoy ny Minisitra Koca, dia "ny marary 136 dia natomboka. Azo antoka ny fatra amin'ny fitsaboana. Fantatray fa ny fatra iray sy boaty iray antonony misy fahazoan-dalana avy amin'ny Komity siantifika dia ampiasaina ho an'ny marary, ary farafaharatsiny 5 andro fampiasana. Afaka hiresaka mazava kokoa isika amin'ny herinandro ho avy na mahasoa na tsia. ”
"83 tapitrisa tsy mila maka ny fitsapana"
Koca koa dia nanome fanazavana momba izay tokony hanao ireo fitsapana ary nilaza hoe: “olona 83 tapitrisa no tsy mila manao fitsapana, tsy misy fampiharana toy izany eto amin'izao tontolo izao. Satria rehefa miatrika ny fitsapana dia mety ho ratsy, saingy mety hisy fiantraikany rehefa afaka 3 andro sy 5 andro. Afaka tratran'ny areti-maso olona maro amin'io fotoana io. Tokony samy hitondra ny otrikaretina ny tsirairay », hoy izy.
Ireto ny fanasongadinana avy amin'ny fanambaran'ny minisitra Selçuk:
Ny minisitra Ziya Selçuk dia nanambara fa miaraka amin'ny tolo-kevitry ny Komity siantifika, dia nanapa-kevitra izy ireo fa ny fialan-tsasatra dia tokony handeha amin'ny fialan-tsasatra mandra-pahatongan'ny 30 aprily ary ny fitohizan'ny fampianarana dia tokony hitohy ao anatin'ny elanelan'ny fepetra coronavirus.
Ny fanamarihana fa ny olana dia nisy olana nisedra voalohany teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao, nanantitrantitra i Selçuk fa heverin'izy ireo amin'ny maha-ministera azy ny resaka ary ny laharam-pahamehana dia ny fahasalaman'ny ankizy.
"Vonona izahay amin'ny karazan-javatra rehetra momba ny fanonerana ny filàna sy ny fanadinana"
Ny filazan'i Selçuk hoe: hanohy ny fianarany miaraka amin'ny programa avo lenta sy feno kokoa izy ireo manomboka amin'ny herinandro,
“Tiako ny mpiray tanindrazana sy ny ray aman-drenintsika rehetra ho mahay mifaly. Vonona izahay amin'ny karazana toe-javatra rehetra momba ny fahavitan'ny sy ny fanonerana ireo filana sy fanadinana zanakao. Tsy misy tokony hanahy fa hanao izay ilaina isika.
Nilaza ny minisitra Selçuk fa isaky ny mandeha izy dia hampahafantatra ny vahoaka ary hizara olana sasany momba ny lalàna, filàna ary fanadinana hafa mifandraika amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena.
22.03.2020/30/XNUMX Torkia Coronavirus Report: Isan'ny maty Total marary dia XNUMX!
Ny zava-misy farany ao amin'ny tetikasa Light Rail Trabzon, Ity ny lalana amin'ny antsipiriany
24.03.2020 Tatitra Coronavirus: Maty marobe 7 izahay
25.03.2020 Tatitra Coronavirus: Very ny isan'ny marary marobe 59 isika
26.03.2020 Tatitra Coronavirus: Very ny isan'ny marary marobe 75 isika
27.03.2020 Tatitra Coronavirus: Very ny isan'ny marary marobe 92 isika
28.03.2020 Tatitra Coronavirus: Very ny isan'ny marary marobe 92 isika
29.03.2020 Tatitra Coronavirus: Very ny isan'ny marary marobe 131 isika
30.03.2020 Tatitra Coronavirus: Very ny isan'ny marary marobe 168 isika
31.03.2020 Tatitra Coronavirus: Very ny isan'ny marary marobe 214 isika
Narary teny an-dalana ny hopitaly
Mahaiza mitsabo Winter
Ireo anjely janga dia mamonjy ny marary tsy misy orana, ririnina
Ireo Air Conducers miasa amin'ny fomba tsy mahazatra amin'ny fiara sasany ao BursaRay dia mahatonga ny mpandeha marary
Ilay mpandeha metrobus dia nandao ilay mpandeha marary teny an-dalana